748 Arday oo tababar afar maalmood soconaya KDQ u furay. | Somaliland National Electoral Commission
Home 2017 April 23 News, trainings 748 Arday oo tababar afar maalmood soconaya KDQ u furay.
748 Arday oo tababar afar maalmood soconaya KDQ u furay.
KDQ wuxu maanta Magaaloyinka Berbera iyo Boorama si toos ah uga furay tababarka shaqaalaha ka shaqayn doona Goobaha Kaadh qaybinta Gobolada Saaxil iyo Awdal, KDQ wuxu 4 malmood ee soo socda tababar siin doona arday gaadhaysa 748 Arday oo ka kala socda Jaamacada Camuud Borama, Jaamacada Culuumta Bada ee Berbera iyo Jaamacada Gollis Berbera.
Xubnaha KDQ iyo maamulka Jaamacadaha ayaa saaka la dardaarmay ardayda siday uga faaidaysan lahaayeen tababarka isla markaan casharada ay halkan ka bartaan ugu shaqayn lahaayen mudada kaadh qaybinta,
Filed in: News, trainings